करीनाका छोरा तैमूरसँग ‘डेट’ जान चाहान्छिन् यी अभिनेत्री::JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
करीनाका छोरा तैमूरसँग ‘डेट’ जान चाहान्छिन् यी अभिनेत्री
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:०९
मुम्बई । सेलीबे्रटी मात्र होइनन् उनीहरुका सन्तानको बारेमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ बलिउडमा । धेरैजसो अभिनेता तथा अभिनेत्रीका सन्तान पनि बलिउडमा प्रवेश गरेर आफ्नो स्थान बनाइसकेका छन् । परिवार नै बलिउडमा लाग्ने प्रवृति व्याप्त छ बलिउडमा । जसको कारण समयसमयमा भाई–भतिजावादको विषयलाई लिएर विवाद बल्झने गर्छ ।
यस्तैमा, यतिवेला सबैको नजरमा परेका छन् अभिनेत्री करीना कपूर तथा अभिनेता सैफ अली खानका छोरा तैमुर खान । सानै उमेरमा उनको चर्चा शिखरमा छ । धेरैजना सामाजिक सञ्जालको तस्बिरमार्फत उनको फ्यान भइसकेका छन् ।
उनीसँग निकट भविष्यमा नै काम गर्न चाहेको अभिनेत रणवीर सिंहले बताएका छन् । उनले करण जोहरको कार्यक्रममा तैमुरसँग काम गर्न रहर लागको बताएका थिए ।
यता, अभिनेत्री तापसी पन्नूले तैमुरसँग ‘डेट’ जान चाहेको खुलाएकी छिन् । उनले भारतीय मिडियाको कार्यक्रम ‘बलिउड हंगामा’ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूलाई तैमूरसँग ‘डेट’ जान मन लागको बताएकी हुन् । तपाईं बलिउडका कुन अभिनेतासँग डेज जान चाहानुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्, ‘ बलिउड ? के म तैमूरसँग डेट जान सक्छु ?’
तापसी अहिले उनको आउँदै गरेको फिल्म ‘बदला’ को रिलीजको तयारीमा छन् । मार्च ८ रिलीज मिति तोकिएको फिल्ममा अमिताभ बच्चन र अमृता सिंहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सुन्जाय घोषको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्मलाई शाहरुख खानको प्रोडक्शन हाउस ‘रेड चिलीज इन्टरटेन्टमेन्ट’ ले उत्पादन गरिरहेको छ ।